Miroborobo ny fizahantany Slovenianina taorian'ny nanamafisan'ny Mpanjakavavin'ny hatsaran-tarehy Melanie Trump ao Sevnica fa mahery fo izy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miroborobo ny fizahantany Slovenianina taorian'ny nanamafisan'ny Mpanjakavavin'i Beauty Melanie Trump ao Sevnica fa mahery fo izy
Miroborobo ny fizahantany Slovenianina taorian'ny nanamafisan'ny Mpanjakavavin'i Beauty Melanie Trump ao Sevnica fa mahery fo izy
Jolay 7, 2019
Fizahan-tany any Slovenia midika fizahan-tany maitso. Ny fiovan'ny toetrandro dia raharaha lehibe any Slovenia izay misy ny tanàna kelin'i Sevnica. Inona no itovizan'ny Washington DC amin'ity tanàna kely Sloveniana ao Sevnica ity? Miaraka amin'ny fisaraham-panambadiana ny filoha Trump tamin'ny fifanarahana momba ny toetrandro any Paris, dia tsy ny antony maintso no antony mahatonga ny maintso. Ny fampitahana vaovao eo anelanelan'ny tanàna roa dia azo antoka fa tsy ny habeny fa angamba samy manana tsangambato malaza ireo tanàna roa ireo.
Ny ondana ny marimaritra iraisana sy ny fahafahan'ny fizahan-tany amin'izany Vohitra Slovenian dia olona hitan'ny maro ankehitriny fa Herim-pirenena ao Slovenia. Ilay maherifo dia ny vehivavy voalohany any Etazonia, Melania Trump, maodely lamaody amerikana teraka tany Slovene. Teraka tao Novo Mesto amin'ny maha Melanija Knavs azy, ny vehivavy voalohany dia nihalehibe tany Sevnica, ao amin'ny Repoblika Yugoslavia Slovenia. Sevnica dia tanàna iray eo ankavanan'ny Ony Sava ao afovoan'i Slovenia. Toerana fialan-tsasatra sy fitaomam-panahy araka ny Slovenia fizahan-tany.
Ny Slovenianina dia mirehareha amin'ny mpanjakavavin'ny hatsaran-tarehy taloha ary nahatonga azy ireo ho tiavina sy hoderaina amin'ny maha-Ramatoa Voalohany an'i Etazonia. Ny tanàna nisy azy dia nanambara sarivongana vita sokitra vita tanana. Ny sarivongan'ny Liberty any Slovenia dia mampiseho an-dRamatoa Trump voaravaka ilay akanjo manga vovoka nataon'i Ralph Lauren Collection notafiany tamin'ny fitokanana ny vadiny Donald Trump tamin'ny taona 2017, ary nanofahofa tanana izy.
Ny sary vongana dia notendren'ny mpanakanto amerikana monina any Berlin Brad Downey ary noforonin'i Ales “Maxi” Zupevc, mpanakanto Slovenianina ao an-toerana, izay nampiasa rojo vy hanakoritana ny endrik'ilay vehivavy voalohany.
Ny mponina eo an-toerana dia nanome ny heviny momba ny sarivongan'i Melania Trump, izay miainga amin'ny fankasitrahana sy fanamavoana.
Ny tapany taloha Sevnica dia eo ambanin'ny Sevnica Castle eo an-tampon'ny Castle Hill, raha ny ampahany vaovao amin'ilay tanàna kosa dia miitatra amin'ny lemaka eo anelanelan'ny havoana hatrany amin'ny Sava Valley. Nandritra ny taonjato maro, ny tanànan'i Sevnica dia teo amin'ny sisintanin'ny faritra manan-tantara roa an'ny Empira Habsburg: Carniola sy Styria. Io no voatonona voalohany tamin'ny antontan-taratasy voasoratra tamin'ny 1275. Amin'izao fotoana izao ny tanàna dia toerana lavorary ho an'ny fialan-tsasatra ary hialana amin'ny korontana ao an-tanàna. Eo amoron'ny renirano Sava no misy azy, eo amin'ny 90 kilometatra miala an'i Ljubljana, renivohitra Slovenianina.
“I Sevnica dia iray amin'ireo tanàna matory nefa ny fahanginana dia tapaka fotsiny indraindray avy amin'ny akon'ny moteran'ny fiara mandalo. Mijoro eo afovoan-tanàna ianao dia handre feon'ondry vorona - tsy misy hafa. Toerana indostrialy indray i Sevnica, ary olona 5,000 eo ho eo izao no mipetraka. Voapaika tanteraka ny volo ahitra rehetra, ary misy voninkazo na aiza na aiza, ”hoy ny nosoratan'i VICE Media ao amin'ny lahatsorany tamin'ny volana aprily.
Fantatra ny tanàna Castle Sevnica sy ny galeriany, izay mitazona fanangonana tranombakoka samihafa sy fampirantiana mpampiantrano. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny iray amin'ireo fiangonana 47 ao amin'ny tanàna na ny toerana arkeolojika nonina Kristiana voalohany tamin'ny taonjato faha-5 na faha-6 tao Ajdovski Gradec ambonin'ny Vranje.
Akaiky, ilay havoana Lisca, eo amin'ny 947m ambonin'ny haabon'ny ranomasina, dia fomba fijery mahafinaritra, ary ny thermals-ny rivotra dia mahasarika mpamaky paraglider sy gliding glider maro be. Asaina koa ianao hizaha ny Làlan-divay Bizeljsko-Sremiška sy Gornjedolenjska. Aza adino ny mitsabo tena amin'ny divay mena sy saosisy maina tsara kalitao, izay fahaizana manokana eto an-toerana.
Taorian'ny mofomamy Melania, tantely Melania, ary na dia ny tsinontsinona an'i Melania aza, ny tanàna Sloveniana an'ny vehivavy voalohany amerikana dia hirehareha amin'ny sarivongan'ny zanany vavy malaza indrindra - na dia efa niatrika famerenana hevitra mifangaro aza.
Notokanana ny zoma ny sarivongana manana habe amin'ny fiainana any ivelan'ny tanànan'i Sevnica ary sanganasan'ny mpanakanto amerikana mpiorina amerikana Brad Downey, 39 taona, izay nilaza fa io no tsangambato voalohany na aiza na aiza natokana ho an'ny vadin'ny filoham-pirenena Donald Trump.
Ny sary sokitra dia voasokitra tao anaty hazo tamin'ny tsofa vy ary mampiseho an'i Melania amin'ny akanjo manga manangana ny tanany havia amin'ny fihetsika manofahofa, naka tahaka ny pose nokapohiny tamin'ny fitokanana ny vadiny tamin'ny taona 2017.
Ny fombany somary malefaka dia nahatonga ny mpitsikera sasany tao amin'ny media sosialy hanome azy io ho “scarecrow”.
"Azoko tsara ny antony mety hiheveran'ny olona fa tsy mahaliana azy io raha tsy ny famaritana ny fisehoany ara-batana," hoy i Downey, saingy nanitrikitrika izy fa nahita ny valiny "tsara tarehy tanteraka."
Hatramin'ny nitondran'i Donald Trump ny asany tamin'ny 2017, Sevnica matory dia nanjary andriamby ho an'ny mpizahatany sy ny mpanao gazety nitady hevitra momba ny lasa nataon'ny vehivavy amerikana voalohany. Ny mpandraharaha ao an-toerana dia nanararaotra ny fidiran'ny rano, nanolotra karazan-tsakafo sy varotra marika marika Melania ary koa fitsidihana ny faritra mandray ireo toerana manan-tantara tamin'ny taonany.
Downey dia tonga niaraka tamin'ny sarivongana ho ampahany amin'ny tetikasa mikendry ny hikaroka ny fakan'ny vehivavy Slovenianina voalohany ary nanendry ny mpanao asa tanana any an-toerana Ales Zupevc - fantatra ihany koa amin'ny hoe "Maxi" - handrafitra ny sary sokitra.
Nilaza i Downey fa nahagaga azy fa teraka tamin'ny taona iray ihany i Maxi ary tao amin'ilay hopitaly mitovy amin'i Melania tenany ihany.
Nilaza izy fa ny resaka nifanaovana tamin'i Maxi dia nahatonga azy hahita ny razamben'i Melania tamin'ny mason'ny olona.
"Hitanao io renirano io izay mety ho efa hitany tamin'ny fahazazany, hitanao ny tendrombohitra," hoy izy.
Na izany aza, tsy ny rehetra no nafindra lyrical momba ny kanto.
Nika, mpianatra maritrano 24 taona eo an-toerana, dia nilaza hoe: “Raha natao ho parody ilay tsangambato dia nahomby ilay mpanakanto.
"Izahay ao Sevnica dia tsy afaka mihomehy ary, miaraka amin'izay, mihazona ny lohantsika eny an-tanantsika noho ny lazan'izy ireo (ny trompetra)," hoy izy nanampy.
Katarina, 66 taona monina ao Rozno tsy lavitra teo, dia nilaza fa nihevitra izy fa “hevitra tsara” ilay tsangambato.
"Maherifo Slovenianina i Melania, tafakatra any Etazonia ambony izy," hoy izy.
Tranon-kolontsaina fito fanampiny natambatra tamin'ny lisitry ny vakoky ny UNESCO
Toerana nanomanan'ireo fenisianina loko miloko